Caqabado: Sababta Sababta loo Sameeyo SEO Waxtarka Internetku waa ku qosol
SEO wuxuu caawiyaa hagaajinta darajooyinka iyo taraafikada websaydhka.Inta badan macluumaadka waxbarasho ee ku saabsan SEO waxaad ka heli kartaa internetka waxay ka timaadaa kuwa soo saaraha sare iyo hal takhasusle.Suuqa suuqa ee maanta, waa muhiim in hoggaamiyeyaasha ganacsigu ay ku kalsoonaadaan qalabkaas oo ay fahmaan nuxurkaMuhiimadda SEO ee horumarka mustaqbalka ee shirkadda.
Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare ,wuxuu sharxayaa sababta macluumaadka waxbarasho ee ku saabsan SEO ka helay internetka keenayaan go'aan qaldan ee istaraatijiyada SEO
Uma baahanno inaan iska indhatirno muhiimadda talobixinta SEOgebi ahaanba. Taas bedelkeeda, dadku waa in ay hore u socdaan taxaddar,isticmaalka talooyinkan:
1. Hubi macluumaadka ka hor fulinta. Xogta ay bixiso berrinkadaabacayaashu way kala duwan yihiin wixii aad xaqiiqda ku haysan lahayd
2. Fahmaan waxa dhabta ah ee macluumaadkaan macnaheedu yahay shirkaddaada iyosababta ay muhiim u tahay in la iska ilaaliyo talobixin la'aanta ah
3. Isku day habab cusub oo u muuqda in uu yahay mid khatar ah sababtoo ah hubin la'aanta.Si kastaba ha noqotee, faa'idooyinka ayaa laga yaabaa inay ka badan yihiin qasaarooyinka habka tijaabada ah
Falanqaynta kala duwanaanshaha
SEO ma aha mid caalami ah, waxayna ka duwan tahay meelo badan sida algorithms,baaxadda tartanka, iyo isbeddellada ganacsiga gaarka ah. Tusaale ahaan, algorithms-ka maxaliga iyo gobolka..Qofka raadinayamaqaalada ku saabsan SEO-ga maxaliga ah waxay ka heli doontaa talobixinta gobolka SEO ee aan khuseyn. Shirkadaha waxay isticmaali karaan istaraatiijiyado tartan oo gaar ah oo ku salaysan go'aanadoodamoodooyinka ganacsiga. Sidaa darteed, arrimo guul leh maahan isku mid. Hal shirkad ayaa laga yaabaa inay ku guuleystaan ​​guusha iyaga oo isticmaalaya erayo muhiim ah laakiin ku guuldareystamid kale haddii ay isticmaalaan hab isku mid ah. Ugu dambeyntii, kakanaanta naqshadaynta waxay adkeyneysaa in lagu go'aamiyo sababta keentay natiijada.Sababaha kor ku xusan waxay sameeyaan habka kiiska-kakan ee kusalaysan doorka ugu fiican ee SEO-ga. Taasina waa sababtamacaamiisha waxay aaminaan adeegyadayada
Mid ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee saameeya SEO maanta waa faafinta xog aan sax ahayn.Macluumaad la'aanta aan ula kac ahayn waa khaladaadka daabacaadaha oo kaliya, laakiin waaxda isgaarsiinta. Isbedelka qaybta ayaa keentay xogtahelitaanka, taas oo ah wax qiimo leh oo wax ku ool ah. Sidaa darteed, xirfadlayaashu waa inay helaan iyo siiyaan macluumaadka macaamiishaxitaa ka hor inta aan la xaqiijin. Way sahlan tahay in la abuuro aragti laga soo qaaday dhacdo la isku haleynayo oo ka duwan tii ugu dambaysay ee akhristayaasha. Iyada oo lakordhinta tirada dadka wax-tarbiyeyaashu, fursadda ay u faafinayaan macluumaad been ah waa mid aad u sarreeya. Macluumaadka khaldan ee khaldan waxay ka yimaadaa is-sheegidkhabiiro kali ah oo doonaya in ay faa'iido u yeeshaan. Inta badan macluumaadkaan macluumaadka ah waxay ka imaanayaan boodhadhka awoodda yar iyo shirarka.
Daraasad sayniska ah ayaa muujinaysa in dadku ay u sahlan yihiin inay wax bartaansi ka duwan qaababka dhaqameed ee dhaqanka. Akhrinta iyo dib u soo noqoshada macluumaadka ma sameysna dareemo shucuur oo dabiiciyan ah sida uu u yahayshaqeeyaa. Adigoo ku dhiirigelinaya in aad adigu iskaa uhesho bogga, waxaa suurtogal ah in ay dhibaatooyinka ku xalliyaan si sahlan oo ay ula socdaanxalka xitaa hoggaamiyeyaasha warshadaha ayaan horay u tixgelin. In la diido talo, ama waydiisato, waxay horseedi doontaa in ay noqoto mid sii casrisanwadada. Talo kasta oo la bixiyay waa inay ahaato mid keliya oo la adeegsan karo marka la baranayo warshadaha ama marka la abuurayo fikrado cusub Source . Diiditaanka istaraatiijiga ugu fiicanwaxay u baahan tahay feker muhiim ah oo ku saabsan waxa uu bartay iyo bartay cilmi-baaris ku saabsan sheyga shirkaddaada